Qha ga mshelana Ngaphambi kobudala beefowuni zeselula
Ede ngaphambi kokuba i-imeyile ibe nexesha elide ngaphambi kokuthumela i-texting, kwakukho iipersi, iifowuni eziphathekayo zesefowuni ezithintekayo ezivunyelwe ukusebenzisana kwabantu ngokukhawuleza. Kwafika ngo-1921, i-pagers-okanye "i-beepers" njengoko yaziwa kwakhona-yafikelela kwiminyaka yawo-1980 nangama-1990. Ukuba unokulenga kwi-loop yasebhanti, i-pocket ye-shirt okanye i-purse strap kwakufuneka ugqithise uhlobo oluthile lwesimo-somntu obalulekileyo okwaneleyo ukuba afumaneke kweso saziso somzuzu.
Njengama- texters e-emoji-savvy , abasebenzisi be-pager bagqiba ekugqibeleni bavelise uhlobo lwabo lokunxibelelwano olufutshane.
Inkqubo yokuqala ye-pager ifakwe kwisetyenziswe yiSebe lePolisa laseDetroit ngo-1921. Nangona kunjalo, bekungekho ngo-1949 ukuba i-pager yokuqala yefowuni yayinelungelo lobunikazi. Igama lomqambi lalingu-Al Gross, kwaye abahedeni bakhe basebenziselwa okokuqala kwisibhedlele samaYuda saseNew York City. I-Gross 'pager yayingumsebenzisi wesistim efumaneka kuwo wonke umntu. Enyanisweni, i-FCC ayizange ivume i-pager ukuze isebenzise uluntu kude kube ngowe-1958. Ubuchwephesha beyiminyaka emininzi igcinwe ngokukhawuleza kubonxibelelwano obubalulekileyo phakathi kwabaphenduli abaphuthumayo njengamapolisa, abacimi bomlilo kunye nabaqeqeshi bezonyango.
I-Motorola iyakuthengisa iMarike
Ngo-1959, i-Motorola yakhiqiza umkhiqizo womnxeba womnxeba owazibiza ngokuba yi-pager. Isixhobo, malunga nesiqingatha sobukhulu besidaka samakhadi, sasine-receiver encinane esithumela umyalezo womsakazo ngabanye abathwele isixhobo.
Umqhubi wokuqala ophumelelayo wabathengi be-Motorola's Pageboy I, owaqala ukuqala ngo-1964. Kwakungekho mboniso kwaye ayikwazanga ukugcina imilayezo, kodwa yayingenakukhutshwa kwaye yazisa umgcini ngetoni yintoni ayimelwe ukuyithatha.
Kwakukho izigidi ezi-3.2 zeepager abasebenzisi emhlabeni wonke ekuqaleni kwee-1980. Ngelo xesha i-pagers yayinomlinganiselo omncinci kwaye yayisetyenziselwa kakhulu kwiimeko ze-site-umzekelo, xa abasebenzi bezonyango befuna ukunxibelelana nabanye esibhedlele.
Ngeli xesha, i-Motorola yayivelisa izixhobo kunye neziboniso ze-alphanumeric, ezivumela abasebenzisi ukuba bafumane kwaye bathumele umyalezo ngokusebenzisa inethiwekhi yedijithali.
Kwiminyaka elishumi kamva, ububanzi bendawo ephakamileyo yayisungulwe kwaye ngaphezu kwezigidi ezingama-22 zezixhobo zazisetyenziswa. Ngowe-1994, kwakukho izigidi ezingaphezu kwezi-61 ezisetyenziswayo, kwaye iipers ziye zathandwa ngokunxibelelana nabantu. Ngoku, abasebenzisi bepager bangathumela nayiphi na imiyalezo, ukusuka ku "Ndiyakuthanda" ukuya ku "Goodnight," bonke basebenzise isethi yamanani kunye ne-asterisks.
Indlela Amagqabi asebenza ngayo
Inkqubo yobuhedeni ayilula nje, inokuthenjwa. Umntu oyedwa uthumela umyalezo usebenzisa i-tone-tone yefoni okanye i- imeyile , leyo leyo idluliselwa kwiphepha lomntu ofuna ukuthetha nayo. Loo mntu ukwaziswa ukuba umyalezo ungena, mhlawumbi nge-beep ezwakalayo okanye ngokutshukunyiswa. Inombolo yefowuni engenayo okanye umyalezo wesicatshulwa uboniswa kwi-screen ye-LCD yeskrini.
Ngoxa i-Motorola yayeka ukuvelisa i-pagers ngo-2001, isakhiwa. Intetho yinkampani enye ebonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo zentetho, kuquka enye indlela, iindlela ezimbini, kunye ne-encrypted. Kungenxa yokuba iikhompyutha ze - smartphone zanamhlanje azikwazi ukukhuphisana nokunyaniseka kwintambo yenethiwekhi.
Ifowuni ifanelekile njengenethiwekhi yeselula okanye i-Wi-Fi apho isebenza kuyo, ngoko ke amanethiwekhi amaninzi asenayo imimandla efile kunye nokukhutshwa okubi. Iintlanga zaso zihambisa ngokukhawuleza imilayezo kubantu abaninzi ngexesha elifanayo-kungekho zilawu ekuhambiseni, okubaluleke kakhulu xa imizuzu, nokuba imizuzwana, ibaleke kwimeko engxamisekileyo. Ekugqibeleni, amanxibelelwano eselula akhutshwa ngokukhawuleza ngexesha leentlekele. Oku akukwenzekayo kumanethiwekhi angama-paging.
Ngoko de amanethiwekhi omnxeba abe njengokwethenjelwa, i-"beeper" encinci exhomekeke kwibhande ihlala yindlela efanelekileyo yokunxibelelana nabo basebenzayo kwiinkalo zonxibelelwano ezibalulekileyo.
Iintlobo ezininzi kwiItaliyane
Iivesi zeBhayibhile zokukunceda ngokufa komntu othandekayo